သင် တစ်နေ့လျှင် Facebook ဘယ်နှနာရီ သုံးသလဲဆိုတာ ဘယ်လို သိမလဲ ? - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းပညာဗဟုသုတ > သင် တစ်နေ့လျှင် Facebook ဘယ်နှနာရီ သုံးသလဲဆိုတာ ဘယ်လို သိမလဲ ?
သင် တစ်နေ့လျှင် Facebook ဘယ်နှနာရီ သုံးသလဲဆိုတာ ဘယ်လို သိမလဲ ?
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 2:42 AM Facebook Tutorial, နည်းပညာဗဟုသုတ
[ZawGyi]ဖြင့်ဖတ်ရန် Facebook က Android App မှာ Your Time on Facebook အမည်ရ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ သူက တစ်နေ့လျှင် သင် Facebook ကို အချိန်ဘယ်လောက် သုံးသလဲ ဆိုတာကို တစ်နေ့ချင်းစီအတွက် ပြသပေးထားပါတယ်။ တစ်နေ့လျှင် Facebook သုံးမယ့် အချိန်ကိုလည်း သင်က သတ်မှတ်ထားနိုင်ပြီး အဲဒီ အချိန်ပြည့်ရင် သူက သင့်ကို အသိပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ Facebook ကို အလွန်အကျွံ အသုံးပြုသူများ အတွက် အလွန် အသုံးဝင်ပါတယ်။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို သုံးဖို့ Facebook App ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှ မီနူးကို နှိပ်ပါ။ Settings & Privacy ကဏ္ဍအောက်မှ Your Time on Facebook ထဲသွားပါ။
အဲဒီမှာ တစ်ပတ်အတွင်း တစ်ရက်လျှင် သင် Facebook သုံးတဲ့ အချိန်ကို ရုပ်ပုံကားချပ်များ၊ နာရီ၊ မိနစ်များဖြင့် ပြသထားပါတယ်။ သင် ကြည့်ချင်တဲ့ နေ့ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး အချိန်ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Manage Your Time ကဏ္ဍအောက်မှ Set Daily Reminder ကို နှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာ သင် တစ်နေ့လျှင် သုံးမယ့် အချိန်ကို သတ်မှတ်ပေးပါ။ အဲဒီ အချိန်ပြည့်တာနဲ့ သူက သင့်ကို Notification ဖြင့် သတိပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Manage Your Time ကဏ္ဍအောက်မှ News Feed Preferences ထဲမှာတော့ သင် မနှစ်သက်တဲ့ လူများ၊ Page များ၊ Group များကို Unfollow လုပ်ခြင်း၊ သင် နှစ်သက်တဲ့ အရာများကို See First လုပ်ခြင်းဖြင့် သင့် Newsfeed မှာ သင် မနှစ်သက်တဲ့ အရာများကို မမြင်ရတော့ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် Facebook သုံးတဲ့ အချိန်ကို သက်သာစေမှာပါ။
Change Notification Settings မှာ သင် အလိုမရှိတဲ့ Notification များကို ပိတ်ခြင်းဖြင့်လည်း သင် Facebook သုံးတဲ့ အချိန်ကို လျှော့ချနိုင်မှာပါ။
သငျ တဈနလြေှ့ငျ Facebook ဘယျနှဈနာရီ သုံးသလဲဆိုတာ ဘယျလို သိမလဲ ?
[Unicode]ဖွငျ့ဖတျရနျ Facebook က Android App မှာ Your Time on Facebook အမညျရ လုပျဆောငျခကျြကို ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ သူက တဈနလြေှ့ငျ သငျ Facebook ကို အခြိနျဘယျလောကျ သုံးသလဲ ဆိုတာကို တဈနခေ့ငျြးစီအတှကျ ပွသပေးထားပါတယျ။ တဈနလြေှ့ငျ Facebook သုံးမယျ့ အခြိနျကိုလညျး သငျက သတျမှတျထားနိုငျပွီး အဲဒီ အခြိနျပွညျ့ရငျ သူက သငျ့ကို အသိပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလုပျဆောငျခကျြဟာ Facebook ကို အလှနျအကြှံ အသုံးပွုသူမြား အတှကျ အလှနျ အသုံးဝငျပါတယျ။
ဒီလုပျဆောငျခကျြကို သုံးဖို့ Facebook App ရဲ့ ညာဘကျအပျေါထောငျ့မှ မီနူးကို နှိပျပါ။ Settings & Privacy ကဏ်ဍအောကျမှ Your Time on Facebook ထဲသှားပါ။
အဲဒီမှာ တဈပတျအတှငျး တဈရကျလြှငျ သငျ Facebook သုံးတဲ့ အခြိနျကို ရုပျပုံကားခပျြမြား၊ နာရီ၊ မိနဈမြားဖွငျ့ ပွသထားပါတယျ။ သငျ ကွညျ့ခငျြတဲ့ နကေို့ တဈခကျြနှိပျပွီး အခြိနျကို ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
Manage Your Time ကဏ်ဍအောကျမှ Set Daily Reminder ကို နှိပျပါ။ အဲဒီမှာ သငျ တဈနလြေှ့ငျ သုံးမယျ့ အခြိနျကို သတျမှတျပေးပါ။ အဲဒီ အခြိနျပွညျ့တာနဲ့ သူက သငျ့ကို Notification ဖွငျ့ သတိပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
Manage Your Time ကဏ်ဍအောကျမှ News Feed Preferences ထဲမှာတော့ သငျ မနှဈသကျတဲ့ လူမြား၊ Page မြား၊ Group မြားကို Unfollow လုပျခွငျး၊ သငျ နှဈသကျတဲ့ အရာမြားကို See First လုပျခွငျးဖွငျ့ သငျ့ Newsfeed မှာ သငျ မနှဈသကျတဲ့ အရာမြားကို မမွငျရတော့ပါဘူး။ ဒီလိုလုပျခွငျးဖွငျ့ Facebook သုံးတဲ့ အခြိနျကို သကျသာစမှောပါ။
Change Notification Settings မှာ သငျ အလိုမရှိတဲ့ Notification မြားကို ပိတျခွငျးဖွငျ့လညျး သငျ Facebook သုံးတဲ့ အခြိနျကို လြှော့ခနြိုငျမှာပါ။
သင် တစ်နေ့လျှင် Facebook ဘယ်နှနာရီ သုံးသလဲဆိုတာ ဘယ်လို သိမလဲ ? Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 2:42 AM Rating:5[ZawGyi]ဖြင့်ဖတ်ရန် Facebook က Android App မှာ Your Time on Facebook အမည်ရ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ သူက တစ်နေ့လျှင် သင် Fa...